Hlola iChichen Itza, Mexico - World Tourism Portal
Hlola uChichen Itza, eMexico
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eChichen Itza, eMexico
Ongakwenza eChichen Itza, eMexico
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeChichen Itza
Bukela ividiyo emayelana noChichen Itza
Hlola uChichen Itza, elikhulu kunawo onke amadolobha abavubukuli bezimpucuko zangaphambi kukaColumbian Maya eNhlongeni Yucatan ye Mexico. Ngenye yezindawo ezivakashelwa kakhulu eMexico. Inikezwe isikhundla se-World Heritage Site e1988 yi-UNESCO World Heritage Site futhi isanda kukhethwa njengenye ye-New Seven Wonders of the World.
Abavakashi abaningi bavakashela uChichen Itza njengohambo losuku, ikakhulukazi ukusuka Cancun amamayela angaphezu kwe-100 amamayela. Le ndawo yemivubukulo ibuye ibe yihora nehafu ukusuka eMerida, inhloko-dolobha yaseYucatan. Imiphakathi yamaMaya eduze kwaseChichen Itza isungule amasayithi amaningi amahle abahambi ukuba bajabule ngefa lamaMaya Cultural. Kunconywa ukuthi ugweme ukuvakasha kosuku ukuya eChichen Itza bese uhlela ubusuku noma amabili ukujabulela yonke imisebenzi eduzane. Lokhu kuvumela isikhathi ukubona okungaphezulu kwengxenye yalesi siza esikhulu. Uma uhlala ubusuku lapha, siza endaweni yemivubukulo ngaphambi kosuku olungashisi kakhulu, nangaphambi kokuba kufike iningi labakhweli bosuku. Lokhu kuyipaki elikhulu futhi imvamisa izivakashi zikuhlelo oluqinile, cabanga ngemisebenzi yomhlahlandlela. Zitholakala emnyuziyamu ekungeneni futhi zinhle kakhulu futhi zithengiswa ngentengo efanelekile. Uma ukhathele inkampani yabo, ngeke ikhathazeke uma usho ukuthi ungathanda ukuvakasha wedwa. Umhlahlandlela ungakunika imininingwane ngokulala ubusuku bonke endaweni leyo.
Isayithi livulwa nsuku zonke, i-9-5.
UChichen Itza wayeyindawo yokuhambela amaMaya asendulo iminyaka engaphezu kwe-1,000. I-Sacred Cenote (umgodi omkhulu wemvelo noma umgodi wamatshe wokucwilisa) yayingcwele ku-Divine Chod "Chac" wasendulo.
Mayelana ne-987 umphathi we-Toltec wabantu basenkabeni Mexico weza lapha, futhi nabangane bakhe abangamaMaya benza uChichen Itza idolobha elinamandla kunazo zonke eYucatan. Umbusi wazibiza ngegama elithi "Kukulcan", igama lesithixo saseMesoamerican Feathered Serpent (esidume nangokuthi "Quetzalcoatl") noChichen Itza waba isizinda sokukhulekelwa kwalowo nkulunkulu. Kwakhiwa lapha izakhiwo eziningi ngengxubevange yezitayela zeMaya neToltec.
Mayelana ne-1221 amaMaya avukela ababusi baseChichen Itza. Idolobha alishiywanga dengwane, kepha njengoba amandla ezepolitiki ayeshintsha kwenye indawo lehla futhi akubanga zakhiwa izakhiwo ezinkulu. Izizathu zokuthi lo muzi ushiywe ekugcineni azaziwa, kodwa imibhalo yaseSpain iveza ukuthi leli dolobha selivele lashiywa lapho lifika.
Izakhiwo zeChichen Itza zagcwala ihlathi futhi zabola kancane kwaze kwaqala amaphrojekthi amakhulu okuvubukula kuma-1920s. Kusukela lapho, ezinye izakhiwo zakudala ziye zasulwa futhi zabuyiselwa futhi izivakashi eziningi zivakashela.
Esizeni uthola ukuzungeza ngezinyawo. Gqoka izicathulo eziqinile, zokuhamba ntofontofo; cabanga ukuthi ungafuna ukuzama ukukhuphuka izitebhisi zamatshe ezinzima kubo. I-sunscreen kanye nesigqoko esibanzi esibanzi kungenzeka kube yimibono emihle futhi. Kunomthunzi omncane kakhulu ongasebenziseka emahoreni aphakathi kosuku. Letha ama-binoculars, ukubuka izinkanyezi kanye nokwenza izinyoni kuyinto emangalisayo kulesi sifunda. Futhi, uma ufuna ukwazi kabanzi ngemiphakathi yasendaweni yaseMayan, ukupheka kwabo, amasiko enkolo, uhlelo lwekhalenda nobuciko basendulo; vakashela amadolobhana amancane azungeze iChichen.
Lezi zingxenye zempucuko ehehayo yezikhathi ezedlule. Imihlahlandlela enolwazi kahle ekhuluma zonke izilimi ezinkulu iyatholakala ngokuqashwa lapha, noma landa uhlelo lokusebenza lwencwadi yeseluleko se-smartphone yakho noma uhlola ngokwakho ngencwadi yomhlahlandlela nemephu.
Iphiramidi yaseKukulcan noma i-El Castillo - indawo eyaziwa kakhulu yeChichen Itza. Lokhu kwakuyiphiramidi lethempeli elalinikezelwe ku-Featched Serpent God, Kukulcan. Ibizwa ngokuthi "Inqaba". Imidwebo yeSychedents enezimbotshana yehla yenyuka emaceleni esitebhisi esisenyakatho, futhi isuswa ngamathunzi asuka emaceleni ekhoneni entwasahlobo nase-Fall equinox.
Ithempeli Langaphakathi I-Maya lalivame ukwakha amathempeli amasha asanda kwakhiwa. Izazi zemivubukulo zenze imigudu evumela ukubukwa kwethempeli lakuqala laseKukulcan ngaphakathi kwelizayo. Ngena ngomnyango ongaphansi kwesitebhisi esisenyakatho, futhi ungakhuphuka ngesitebhisi sangaphakathi esitebhisi ukhuphukele egumbini elingaphezulu lapho ungabona khona isihlalo sobukhosi seKing Jaguar seJaguar, esibaziweyo ngamatshe futhi sibhalwe ngopende obomvu ngezindawo ze-jade. Kungukuhlaba umxhwele, kepha ukukhuphuka ngendlela ephansi yangaphakathi kungenzeka kube kukhulu kakhulu kulabo abane-claustrophobia.
IGreater Ballcourt - kunezinkantolo ze7 zokudlala i-Mesoamerican ballgame kuChichen Itza. Lesi singesikhulu kakhulu futhi sihlaba umxhwele kakhulu, hhayi endaweni kuphela kodwa kuyo yonke iMesoamerica yasendulo.
I-Temple of the Jaguars - Inamathele esakhiweni se-ballcourt, enamatshe e-jaguar, anekholomu yenyoka enezinwele, futhi ngaphakathi.
Ama-Sweatbaths - kunezakhiwo eziningi zeZumbul che ezitholakala kuzo zombili izingosi zeChichen Itza nase-Old Chichen. Lezi zimpikiswano zamaMaya zabamba iqhaza elibalulekile emasikweni angokomoya amaMaya asendulo njengezindawo zokuhlanzwa kwengqondo, umzimba, kanye nemizwelo, ngaleyo ndlela ukuxhumana namandla amsulwa ngokomoya.
U-El Caracol - ithempeli eliyindilinga epulatifomu elingunxande, futhi elingcwele eKukulcan, lasebenza njengendawo yokubheka izinkanyezi.
Ithuna Lompristi Ophakeme - uhlobo oluncane lwe- “Castillo” lwalusebenza njengethuna labanye bababusi bomuzi.
I-Nunnery Complex - Isigodlo senkosi yaseChichen Itza sibuyele emuva ngaphambi kokufika kwamaToltecs
Ithempeli lePhaneli Zodonga
I-Akab 'Dzib - isigodlo esinemibhalo ye-hieroglyphic
I-Old Chenhen - elinye iqembu lezakhiwo namathempeli ahamba imizuzu embalwa ukusuka maphakathi nendawo. I-Old Chenhen ihlanganiswe ngaphakathi kwempahla yangasese yeHacienda Chichen futhi ayivulekele ukuvakasha komphakathi. Lesi siza sendawo yemivubukulo yamaMaya siseningizimu yamanxiwa evame ukuhanjelwa amaMaya. Iyingxenye yeMaya Jungle Reserve neMvelo Trails futhi ivulekele kuphela izivakashi zeHacienda Chichen nezivakashi zokubuka izinyoni nokuhamba ngamahhashi. Njengamanje amathempeli ambalwa amaMaya asakhiwa kabusha yi-INAH, afaka:
Iqembu Lokuqala Lochungechunge
Ipulatifomu ye-Great Turtle
Izindonga zeBalankanche, lapho ukukhetha okukhulu kobumba kwasendulo nezithombe kungabonakala kusendaweni lapho bezishiywe khona ngezikhathi ze-Pre-Columbian.
I-Cenote Ik Kil Beautful cenote evulelwa umphakathi ukuthola i-swmming.
Umbukiso wokukhanya nomsindo. Umbukiso okhanyayo uyamangalisa impela futhi uhlala imizuzu eyi-30. Umlando ubhalwe ngeSpanishi kuphela. Ukwemukelwa kumahhala, kepha udinga ukubhala igama lakho ohlwini lokulinda ukuthola isihlalo (uma ungakwenzi, kufanele ungene ngemuva kwabantu abanamathikithi futhi kufanele ume, kodwa akunandaba kangako lokho ).
"Izinganekwane Zesibhakabhaka SamaMaya" - lo mbukiso wamaplanethi obumbayo okhiqizwe yiChabot Space & Science Center e-Oakland California. Kuboniswa ngesiNgisi neSpanish (ukushintshana) eMayaland Hotel. I- “Mayan Planatarium” isakhiwo esisha.
I-Yaxkin Spa (ihhotela likaHacienda Chichen) inikeza amasiko obuhle obugcwele obususelwa emasikweni amaMaya asendulo.
Le ndawo inamathuba amahle okubuka izinyoni. Izivakashi eHacienda Chichen zingena endaweni yokubalekela izinyoni nehhotela nemizila yemvelo ebanzi.
Kunezinhlobo eziningana zama-cenotes amahle, ama-tunholes amanzi amasha ku-limestone, atholakala eduze kweChichen Itza. Ezinye zazo zizungezwe izingadi ezihlanzekile ezinezindawo zokudlela, izindlu zokugeza kanye nemifula. Ngesikhathi sosuku olushisayo, ama-cenotes enza indlela enhle yokuzipholisa ntambama, thatha ikhefu ahlukanise usuku lwakho.
Ukwehla kweKukulcan Ngesikhathi sezinsuku ezintathu ezigujwe kakhulu ezifakazelwa ukuthi uKwehlukanisa i-Kukulcan (i-19th, i-20th kanye ne-21st kaMashi), uChichen Itza uphethe umculo, imidanso kanye nemidlalo yaseshashalazini ehlelwe ngaphakathi kwendawo, kanye nasekufinyeleleni umnyango.
UToh Boutique kanye ne-Maya Hut bathengisa ubuciko beMaya, izindwangu nobucwebe. Ukuthengwa kweseka iMaya Foundation kanye noHlelo Lokulondolozwa Kwemvelo Nenhlengethwa Yezinyoni, kubuyiswa esifundeni futhi kuvimbele ukuzingela ngokungemthetho komzinjana omhlophe nezinye izilwane kule ndawo. Nabo banesiko lokudansa.
Abathengisi baseRandom Batholakala ezindaweni eziningi ezizungeze amanxiwa athengisa izifanekiso zonkulunkulu baseMayan, imidwebo ezingxenyeni ezincane zesikhumba, kuma-obsrian, nakwamanye amaqoqo. Bazokutshela ukuthi kubiza idola ukuthola ukunakwa kwakho, kepha intengo iyashintsha uma uxoxisana.
Hacienda Chichen. Kunikeza izitsha zesifunda, zamazwe omhlaba nezomifino, kwisithambiso samakoloni se16th Century esakhiwe ngamatshe aqoshwe ngeMaya (okwabiwe endaweni yabavubukuli abanqobi baseSpain) ababheke izingadi ezishisayo ezishisayo. Eminye yemifino nezithelo ikhule ngendlela enobunikazi ngabanikazi engxenyeni eseningizimu yezingadi.
Uma uhlola uChichen Itza qiniseka ukuthi uphuza amanzi amaningi asebhodleleni. Labo abangajwayele ukushisa okushisayo nelanga ngenye indlela bangakubeka engcupheni yokuphelelwa ngamanzi emzimbeni. Kunezindawo zokuqabula eziningana endaweni yokuvubukula.